IiNdumiso Chapter23 1 Umhobe kaDavide. UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho. 2 Wenza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla. 3 Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. 4 Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela. 5 Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Uyithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala. 6 Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide. [ Prev ]